(tonga teto avy amin'ny Vietnam)
Repoblika Sôsialistan'i Vietnamy ((mg))
I Vietnamy, na ny Repoblika Sôsialistan' i Vietnamy (amin' ny fiteny vietnamiana: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) dia firenena ao Azia Atsimo Andrefana ao Atsinanan' ny tanjona Indôsinoa. Ny velarantaniny dia 341 690 km² ary ny isam-ponina dia 90,3 tapitrisa tamin' ny taona 2012. Vietnamy no firenena faha-13 be mponina indrindra ary firenena Aziatika fahavalo be mponina indrindra.
Ny firenena mizara sisintany aminy dia Sina, Laôsy ary Kambodia. Ny renivohiny dia Hanoi ary ny tanàna lehibe indrindra dia Hô-Chi-Minh-Ville.
I Vietnamy dia ao atsinanan'ny tanjona indôsinoa. Ny velarantany manontolon' ilay firenena dia 331 210 km² izay mitovitovy velarana amin' i Alemaina. Ny halavan'ny morontsiraka dia 3 444 km.
Ny tendrombohotra avo indrindra ao Vietnamy dia i Phan Xi Păng izay manana haavo 3 143 m
Nampalemy ny toekaren'i Vietnamy ny fandaniambola lehibe ho an'ny tafika sy ny fandaminana ny toekarena. Na dia izany aza, nitombo ohatra ny fitombon'ny toekaren'ny Sinoa ny toekaren'i Vietnamy taorian'ny nanesorana ny ankivy nataon'ny Amerikanina teo antenantenan'ny taona 1990. Nandritra ny taona 2000 dia tsy latsaky 4,7% ny fitombon'ny PIB.
Ny PIB an'i Vietnamy dia 299,2 lavitrisa dolara ka manao azy ho toekarena faha-43 lehibe indrindra. Tamin'ny taona 2011, ny lanjan'ny fambolena ao amin' ny toekaren'i Vietnamy dia 48%, ny sampandraharaha dia 29,6% ary ny indostria dia 22,4%.
Mitombo isan-taona ny fizahan-tany. 4,25 tapitrisa no isan'ireo mpizaha tany noraisin'i Vietnamy tamin'ny 2008.
Firenena niavian'ny mpizaha tany tonga tao Vietnamy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamy&oldid=1040778"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 14:58
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:58 ity pejy ity.